Faritra Atsinanana : Mitsidika an’i Mangabe-Sahananto ny Governora RAFIDISON Richard Théodore
mardi, 13 octobre 2020 10:02
Mitsidika an’i Mangabe-Sahananto ny delegasiona tarihin’ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore.
Ny kaominina MANGABE-SAHANANTO indray ary no nanasa ka notsidihin’ny delegasiona notarihin’Andriamatoa Governora sy ny Solombavam-bahoakan’i Madagasikara voafidy tato anatin’ny Distrikan’i Toamasina faha-2. Tanatin’izao delegasiona izao ihany koa Ramatoa Lefitry ny lehiben’ny Distrika, ny avy amin’ny Talem-paritry ny mponina, Ben’ny tanàna maromaro, mpitandro filaminana, fikambanana sy tetik’asa miasa any an-toerana.
Kaominina tena mamokatra voly avotra sy voly fanondrana maro, sady manankarena tokoa i Mangabe Sahananto. Manodidina ny 80km avaratra andrefan’i Toamasina no misy azy. Io no Kaominina faha-10 anatin’ny Distrika, nandalovan’Andriamatoa Governora tato anatin’ny herinandro maromaro, izay anisan’ny andrefana indrindra ato anatin’ity Distrika ity.
Araka ny toro-marika avy amin’Andriamatoa Filoham-pirenena, dia tsy misy Distrika avela mitokana sy atao ankilabao. Sady manatanteraka izany ny Governoran’ny faritra Atsinanana, no mamita ihany koa ny fanamby fanohizana ny fitsidihana ireo kaominina ato anatin’ny Distrikan’i Toamasina faha-2. Alohan’ny hitsidihana an’i Marolambo sy Antanambao Manampontsy, ireo Distrika roa farany mbola tsy voatsidika hatramin’ny naha voatendry azy hitantana ny faritra Atsinanana.
Asa famakian-dàlana, ezaky ny vahoaka ifotony
Miara-manaiky ny rehetra fa sahala amin’ny Kaominina mitokana maro ato anatin’ny faritra Atsinanana dia ny làlana no anisan'ny hozatra sy antoky ny fampandrosoana.
Noho ny fahatsapana izany, noho ny fanentanan'i Kardinaly Katolika Désiré Tsarahazana, noho ny fanentanan’ny Solombavam-bahoaka ROILAHY Jonah ary koa ireo, Ben’ny tanànan’ny kaominina efatra (04) mpifanolo-bodirindrina (Ambodiriana, Mangabe-Sahananto, Ampisokina, Amporoforo), dia olona nanodidina ny 1500 avy amin'ireo kaominina ireo no niasa isan'andro, resy lahatra ny handray an-tànana ny hoaviny ka namaky ity làlana mirefy 37 km. Herin-tsandry no nampiasaina nandritra ny andro maromaro. Nanohana ara-tsakafo ny Governoran’ny faritra Atsinanana.
Ny firaisankina marina no hery, niam-bavy, nian-dahy ny vahoaka teo ambany fitantanan’ny Solombavam-bahoaka, mpitondra Fiagonana, Sojabe Tangalamena ary Ben'ny tanàna sy kômitim-pokontany ; satria te-hiala amin’ny fitokanana. Marihina fa tamin’ny taona 1976 no tonga farany tamin’iny faritra iny ny « tômôbiligny ». Ny Alakamisy voalohan’ny volana Oktobra tamin’ny 05ora sy 45min hariva no niditra ny tanàna ny fiara voalohany.
Mila tohizana anefa ny ezaka fanatsaràna
Na ny Kardinaly TSARAHAZANA Desiré Arsevekan'i Toamasina, na ny Governoran'ny faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore, izay samy nahita maso izao ezaka vita izao, dia samy niaiky fa mba tsy ho very maina sy an-javona ny ezaka vita, dia mila tohizana izany, mba ho azo ampiasaina mandavan-taona ny làlana.
Ny Fiangonana Katolika, tamin'ny alàlan'ny Kardinaly TSARAHAZANA, dia nanoso-kevitra handray anjara mavitrika sy hentitra amin'ny fanentanana sy fanangonana tsipaipaika hametrahana "basket found" hotantanina sy hampiasaina anaty fangaraharana hanatsaràna ity làlana ity.
Mifandraika amin’izay, ny Faritra Atsinanana manokana dia hanohy ny famporisihana amin’ny taona 2021, ka hanokana kitapom-bola 10 tapitrisa Ariary avy ho an’ny Kaominina Mangabe-Sahananto sy Ambodiriana. Izay hampiasain’izy ireo amin’ny fanatsaràna ny « points noirs » na ireo tapany tena sarotra sy manahirana.
Taratra sy môdely amin’ny asa fampandrosoana izao vitan’ny vahoaka aty ifotony izao, satria mipàka mivantana amin’izy ireo ihany ny ezaka ataony. Ny ezaky ny olom-pirenena toy izany no amporisihin’Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Nirina RAJOELINA. Tsy adinon’ny Governora RAFIDISON Richard Théodore ny nisaotra ny fahaiza-mitarika nasehon’ireo olom-boafidy taty an-toerana. Singanina manokana amin’izany Andriamatoa Solombavam-bahoaka ROILAHY Jonah sy i Mômpera DADILAHY.